September 2016 - Sawirrotv
September 30, 2016 – Waxaa goor dhow ina soo gaaray Muuqaal video-ah oo la sheegay in Shalay galab lagu duubay hoteelka caanka ah ee Prestigious hotel oo ku yaal Magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo Faarax Macalin uu ku weeraray wasiirka. Muuqaalkan ayaa waxaa lagu arkayaa Siyaasiga Soomaali Kenyanka ah ee Faarax Macalin oo …
Danjiraha Maraykanka u Fadhiya Dalka Soomaaliya oo Booqday Soomaalida ku Nool Magaalada Minneapolis (Dhagayso)
September 30, 2016 – Danjiraha dalka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya Stephen Schwartz oo maalmahan booqasho ku joogay magaalada Minneapolis ee dalka Maraykanka, ayaa Soomaalida dalkaasi u sheegay in dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay ka shaqayso afar qaybood oo ay ku mid yihiin amniga, caddaaladda, dhismaha dawladda iyo dib u hesshiisiinta. Waxa uuna sidoo kale …
Faarax Macalin iyo Wasiirka Boostada (VIDEO)
Muuqaalkan ayaa waxaa lagu arkayaa Siyaasiga Soomaali Kenyanka ah ee Faarax Macalin oo feer ku boobsiinaya Wasiirka Boostada iyo Isgaarsiinta ee dalka Soomaaliya, Mudane Mahamed Jama Mursal. Ilaa iyo Hadda lama oga waxa ay isku qabteen labadan Siyaasi, laakiin wararka ay qoreen Warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegay in Faarax Macalin uu warbaahinta Kenya u Sheegay …
Ciyaarta wiilkii 8 jirka ahaa (VIDEO)
Wiilkan ayaa la sheegayaa inuu ku noolyahay dalka Australia, waxaana dadiisa rasmiga ah ay tahay 8 jir, laakiin marka aad barbar dhigto ciyaalka ay isku Faca yihiin ayaa waxa ay noqonayaan kuwo aad u tabar daran. Waxaana Wiilkani loo bixiyay magac u qalma ciyaartiisa oo ah mr. Bulldozer kaas oo ah mid kamid ah mashiinada …
Dowladda Hindiya oo Sheegtay inay Dib u dhigtay Maxkamadaynta Dhalinyradii Soomaalida
September 30, 2016 – Dowladda dalka Hindiya ayaa sheegtay inay dib u dhigtay Maxkamadeynta Dhalinyaro Soomaali ah oo maanta lagu waday in la soo taago Maxkamad ku taalla Magaalada Mumbai. Ragani ayaa loo haystaa inay ahaayeen burcad badeed weerari jiray maraakiibta isticmaasha badweynta Hindiya. Ragan Soomaalida ah ee loo heysto falka Burcad Badeednimada ayaa waxa ay tiradooda gaareysaa 117, …
Faah-Faahino ka soo Baxaya Sarkaal Xalay lagu Dilay Magaalada Muqdisho (DHAGAYSO)
September 30, 2016 – Waxaa xalay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya lagu dilay Sarkaal la sheegay inuu ka tirsanaa Wasaaradda Cadaaladda dowladda Federaalka, iyadoo rag bistoolado ku hubeysan ay ku dileen degmada Waaberi ee Gobolka Banaadir. Marxuumka la dilay ayaa waxaa lagu magcaabi jiray Maxamed Axmed Qoordheere, xilligii la dilayay ayaa waxa uu ka …
Qubanaha & Isbuucan 30-09-2016 (VIDEO)
Dib u dhaca ku yimid doorashada dalka Soomaaliya iyo wel-welka beesha caalamka ay ka qabto sida ay wax ku socdaan iyo Buurta Daalo oo ku taala gobolada waqooyi ee dalka Soomaaliya oo noqday goobo loo dalxiis tago xiliyada uu kulaylaha. Iyo Muslimiinta dalka Faransiiska oo walaac ka muujiyay, Xisbiga Cunsuriyiinta ee dalkaasi ka jira inay …
Madaxweynaha Galmudug oo Kulan la Qaatay Sarkaal ka Socday Dalka Maraykanka (SAWIRRO)
September 29, 2016 – C/kariin Xuseen Guuleed oo ah Madaxweynaha Galmudug ayaa maanta kulan la qaatay wakiil ka socday dowlada Maraykanka, iyadoo weli muran xoogan uu ka taagan yahay cida soo hogaamisay weerarkii diyaaradaha dagaalka ay ku qaadeen ciidamada galmudug ee duleedka magaalada Gaalkacyo. Guuleed iyo wakiilka Maraykanka ayaa la sheegay iney ka wada hadleen …